China Membrane mamiriro kirasi fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Membrane dhizaini imhando yemapurani uye chimiro chakabatana pamwe nehurongwa hweiyo system, isimba rakakwira inoshanduka yakatetepa firimu zvinhu uye ebetsero chimiro kuburikidza neimwe nzira inoita yayo yemukati kuburitsa kumwe kuneta kwekushushikana, uye kushushikana pasi pekutonga kweimwe nzvimbo yenzvimbo. chimiro, semuviri mukuru, chivharo chivharo kana chivakwa uye kuva nekuomarara kwakaringana kurwisa zvokunze mitoro yakatetepa pakati pechimiro chemhando.
Iyo membrane membrane inotsemura pateni yeiyo yakachena mitsara yekuvaka dhizaini, iine yakasarudzika inoyevedza yakakomberedza pamusoro mamodheru, mapfupi, akasvinura, akaomarara uye akapfava, simba uye runako musanganiswa, ichipa vanhu kutsva uye nyowani kunzwa.Membrane chimiro chine simba rakasimba reThe Times. uye mumiririri, seti yezvivakwa, zvivakwa zvemakanika, yakanaka chemakemikari indasitiri, sainzi yezvinhu, komputa tekinoroji seimwe yeanoshanda madhipatimendi einjiniya, ine yakakwira tekinoroji yezvigadzirwa uye hunyanzvi kukwezva, pamusoro payo panogona kuve neshanduko inongopindirana neyakagadzirwa dhizaini Yakabatanidzwa nenzvimbo yakazara, kuvakwa kwechimiro chekufananidzira kweprojekiti, uye kushanda kwakasimba, kwakasiyana siyana kwekushandisa.Zvivakwa zveruzhinji, senge nhandare padenga system, hofisi yendege, nzvimbo yekuratidzira, nzvimbo yekutengesa, kupaka lot, nzvimbo dzepuratifomu. , nezvimwewo Inogona zvakare kushandiswa kune zororo nzvimbo, maindasitiri zvivakwa, makoridho ekupinda uye chiratidzo kana nzvimbo yemamiriro ekuvaka ngs, nezvimwe.
Membrane chimiro zvakanaka:
(1) Kureba kwenguva: Iyo membrane chimiro ine yakareruka yakafa uye yakanaka seismic mashandiro, ayo anogona kubvisa kudiwa kwekutsigirwa kwemukati, kukurira matambudziko akasangana neyechinyakare chimiro mukuzadzikiswa kwehurefu hwakareba (pasina rutsigiro) kuvaka, gadzira yakakura inooneka nzvimbo isina kudzivirirwa, uye zvinobudirira wedzera nzvimbo inoshandiswa nzvimbo.
(2) hunyanzvi:Kamudzira dhizaini yakapaza kuburikidza neyechinyakare chimiro mhando, iyo yakavakirwa modelling, ruvara, inogona kusanganiswa nemasikirwo mamiriro, ipa yakazara mutambo kune fungidziro yemugadziri, inovakwa zvinoenderana nemazano echinyakare ekuvakisa zvinonetsa kuona iyo curve uye akasiyana maumbirwo, uye ruvara rwakapfuma, rakapfuma nguva kunhuwira, rinomiririra runako rwezvimiro kunetseka.Cooperate mwenje kuti ugadzire nzvimbo yemanheru nyore, ipa munhu kuti anakidzwe nerunako rwazvino.
(3) Upfumi: Iyo membrane zvinhu zvine imwe mwenje transmittance, iyo inogona kudzikisira mwenje kusimba uye nguva masikati uye chengetedza simba; Kufambiswa kwemavara emagetsi husiku kunogona kuumba nzvimbo yakanaka.Pamusoro pezvo, iyo membrane chimiro inogona kubviswa, nyore kufamba, kunyanya mukuvakwa kwekushomeka-kwenguva pfupi kwezvivakwa zvakakura zvehurefu, zvinowedzera mari.
(4) Kudzivirirwa: Iyo firimu zvinhu zvine rimi retardancy uye yakakwira tembiricha kuramba, inogona kusangana nezvinodiwa zvekudzivirira moto; Iyo membrane chimiro inoshanduka, iyo inogona kutakura kushomeka kukuru uye hazvisi nyore kudonha. Iyo membrane chimiro ine mwenje wakafa huremu uye wakanaka kudengenyeka kwenyika kuita.
(5) Kuzvichenesa: Iyo membrane zvinhu zvine yekudzivirira kupfeka zvinoshandiswa mune iyo membrane chivakwa, iyo isingaite inonamira. Iyo guruva rinowira pamusoro pechinhu chembrane chinhu chinogona kushambidzwa zvakasikwa nemvura yemvura kuti uwane yakanaka yekuzvichenesa yega uye kuve nechokwadi chehupenyu hwebasa hwechivakwa.
(6) ipfupi nguva muganho: kucheka kwedhayaphira, kugadzirwa kwetambo nesimbi simbi, nezvimwe zvinopedzwa mufekitori, zvinoderedza nguva yekuvaka, asi nezvidimbu zvekongiri zvakasimbiswa kana zvikamu, nezvimwe. Panguva imwecheteyo, dzivisa kuvakwa kwemuchinjikwa, mune yekuvaka saiti waya chete, simbi mamiriro uye kubatana kwenzvimbo yekuisa diaphragm uye kumisikidza kwemaitiro, saka kuvaka saiti, kukurumidza kumisikidza kumisikidza, zvinoenderana neyechinyakare pfupi yekuvaka nguva muganhu weprojekiti.
(7) Wide chikumbiro: Kubva pakuona kwemamiriro ekunze, zvivakwa zve membrane zvinoshanda kunzvimbo yakakura; Nezve chiyero, inogona kunge iri diki setende rimwe chete kana dhizaini yegadheni, kana yakakura kunge zvivakwa zvinofukidza makumi ezviuru kana mazana ezviuru zvekwere. Paive nepo kunyange zano rekufukidza guta diki nekushandisa zvakasikwa nevanhu.
Kamudzira Structure Kirasi
Structural axonometric kudhirowa
Architectural axonometric kudhirowa
Pashure: Net Furemu, Heterosexual Structure Kirasi
Zvadaro: Villa Dhizaini
Membrane Dhizaini Dhizaini
Membrane Dhizaini Dhirowa Dhizaini